PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - "USHAYE UTSHANI WAYOBHACA" UKHULUBUSE
"USHAYE UTSHANI WAYOBHACA" UKHULUBUSE
EZOMPHAKATHI: Akasayikhokhi imali njengomyalelo wenkantolo
Ilanga - 2017-10-05 - Front Page - THANDEKA NGOBESE thandeka.ngobese@ilanganews.co.za
INYUNYANA yezisebenzi, iSolidarity, ithi isola ukuthi uMnu Khulubuse Zuma ushaye utshani wayobhaca e-United Arab Emirates (UAE) emuva kokuyeka ukukhokha izigidi zamarandi, abezikhokha kancane kancane ngokomyalelo weNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng. Le mali imayelana nokuhlakazwa kwemayini i-Aurora, abengomunye wabaqondisi bayo, okuholele ekubeni ibe miningi imindeni ebhuqwa yindlala ngenxa yokuphelelwa wumsebenzi kwabantu kule mayini.
IFANA nezibonkolo elundeni lenkunzi kuMnu Khulubuse Zuma, oyindodana yomfowabo kaMengameli Jacob Zuma, inyunyana yezisebenzi iSolidarity ethi isola ukuthi lo somabhizinisi useshaye utshani wayobhaca e-United Arab Emirates (UAE) - emuva kokwehluleka wukukhokha izigidi zamarandi ngokomyalelo weNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng.
UMnu Zuma - oyindodana kaMnu Ngadlani Zuma, ongumfowabo kamengameli - ubengomunye wabaqondisi be-Aurora Empowerment Systems okuyinkampani ehlakaziwe ngoMfumfu (October) wezi-2011 emuva kokuba ishiye imayini iPamodzi Gold ese-East Rand nase-Orkney eGoli ingenamali.
Yena nabebambisene nabo, okunguMnu Zondwa Mandela ongumzukulu kaMnu Nelson Mandela, uMnu Thulani Ngubane, uMnu Fazel Bhana noMnu Solly Bhana, kunemali okufanele bayikhokhe.
UMnu Zuma kufanele akhokhe u-R23 million njengoba ngowezi-2015 inkantolo ilahle inkampani yabo ngecala lokuphatha budedengu impahla yePamodzi elinganiselwa ku-R1.7 billion.
ISolidarity ithi abaqondisi beAurora badlale ngezisebenzi zabo abangazange baziholele izinyanga ezili-8 ngaphambi kokuba imayini ivalwe.
Emuva kokulahlwa kwabo yicala, i-Aurora ingene esivumelwaneni sokukhokhela izisebenzi zayo eziyizi-5 300 isinxephezelo ngokulahlekelwa kwazo wumsebenzi nangokuzigolima (emaholweni) ngesikhathi zisasebenza.
Ngokusho kukaNobhala-jikelele weSolidarity, uMnu Gideon Du Plessis, uMnu Zuma ubengowokugcina kubaqondisi be-Aurora ukuvuma ukukhokha le mali.
“Ngenyanga ubekhokha u-R500 000, okuthe ngoNtulikazi (July) walo nyaka wayeka ukukhokha. Imali abesayikhokhile bekuwuR9.5 million njengoba sesizwa kuthiwa usebalekile. Laba abajutshelwe ukudla impahla sebefake isimangalo enkantolo ngokubaleka kukaMnu Zuma, icala lakhe lizongena zili-8 kuZibandlela (December) 2017.
Sethemba ukuthi uma udaba lwakhe selulalelwa enkantolo, yona izokwazi ukukhipha umyalelo wokuthi kudliwe impahla yakhe kulelo lizwe asethuthele kulona,” kusho uMnu Du Plessis.
Uthi bazozama ukucela inkantolo ukuba igunyaze uphenyo ngawo wonke amabhizinisi uMnu Zuma ake waba kuwona kusukela ngesikhathi kuvulwa i-Aurora ngowezi-2009 kuze kuba yisikha- thi lapho le nkampani idliwa khona.
“Sikholwa wukuthi kungenzeka asekhona amabhizinisi asebenzisana nawo noma ayingxenye yawo, yize yena engasekho eNingizimu Afrika.
Uma ekhona kuzobe sekubanjwa imihlomulo ayithola kulezo zinkampani kube yiyona ezoqhubeka ikhokhele amalunga ethu imali ayikweletwa yi-Aurora,” kusho uMnu Du Plessis.
Uthi selokhu izisebenzi zabo ziphelelwe yimisebenzi kule nkampani, iningi lazo liduve emakhaya, lidla imbuya ngothi.
“Ngikhuluma nje, kunezisebenzi ebeziqashwe yile nkampani okungezasemazweni angomakhelwane, esezabuyela emakubo zingayi- tholile le mali njengoba uMnu Zuma ematasa edlala umacashelana. Siyinyunyana yezisebenzi, sizokwenza konke okusemandleni ukuze lezi zisebenzi zithole ubulungiswa.
“Uma kufanele sicele inkantolo ukuba imbuyise lapho ebhace khona ukuba azobhekana namacala akhe, nalokho sizokwenza, inqobo nje uma izisebenzi zizothola ubulungiswa,” kusho yena.
Uthi abanye babaqondisi abebekanye noMnu Zuma e-Aurora, bayayikhokha imali okufanele bayikhokhe. ILANGA lizamile ukuthola uMnu Zuma ukuze aziphendulele kulezi zinsolo kodwa ngeshwa izingcingo ezintathu elinazo bezivaliwe.
Ngenyanga ubekhokha u-R500 000...
ISITHOMBE NGABE: TOTPI.COM
ISITHOMBE YI: TWITTER
KUSOLAKALA ukuthi usebhace e-UAE uMnu Khulubuse Zuma okuvela ukuthi uyeke ngoNtulikazi (July) ukukhokha izigidi abelayelwe yinkantolo ukuba azikhokhe.